Guddiga Doorashada Koofur Galbeed oo difaacay musharraxnimada Mukhtaar Roobow – Kalfadhi
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa u sheegay Kalfadhi iney u tartamidda jagada Madaxweynaha Koofur Galbeed ee Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) ay tahay sharci. Guddiga, oo faahfaahin ka siinayey Kalfadhi inta ay gaarsiisan tahay cadaadiska ka haysta in Roobow laga reebo tartanka ayaa sheegay inuu Mukhtaar buuxiyey dhamaan shuruudihii uu qof Reer Koofur Galbeed ah ku noqon lahaa Musharax Madaxweyne oo deegaankaas ah.
Xoghayaha Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed, Xildhibaan Nuur Ibraahim Cusmaan, ayaa wareysi uu siiyey Kalfadhi ku sheegay ineysan fahmi karin waxa dhici doona, laakiin uu Guddigu siiyey Abuu Mansuur shahaadadiisa markii uu dhameystiray dhammaan shuruudihii u degsanaa Musharraxiinta Madaxweynaha Koofur Galbeed. “Guddi ahaan waan guddoonsiinay shahaadadii, shuruudihii loogu talogalayna dhamaan waa uu soo buuxiyey, laakiin wax kale ma hordhici karo anigu” ayuu Xoghaye Nuur ku yiri Kalfadhi.
Guddigu waxa uu sheegay in, maadaama uu Roobow yahay muwaadin deegaanka ah, uu sidaas ku helay xaqa ah inuu u tartami karo jagada ugu sarreysa Dowladnimada Maamulka Koofur Galbeed. Nuur waxa uu ka gaabsaday inuu la wadaago Kalfadhi haddii culeys lagu saarayo Guddigiisa Musharraxaas awgii, wuxuuse ku celceliyey inuu Mukhtaar ka mid yahay lixda musharrax ee u soo gudbay u tartamidda Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koofur Galbeed.
Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur) waxa uu soo ahaa Hoggaamiye Kuxigeenkii Al-Shabaab muddo aad u fog, wuxuuse mansabkaas waayey markii uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo Xubnaha kale ee Al-shabaab, oo uu ku jiray Hoggaamiyihii la dilay Axmed Cabdi Godane. Bishii Agoosto ee sanadkii hore ayuu qaab hishiis ku saleysan ugu soo wareegay aagga dowladda, waxa uuna yimid joogayna Muqdisho, isaga oo xor ah. Markaas waxa uu sheegay inuu Al-shabaab ka baxay 5 sano ka hor. Intii uu Muqdisho joogay, dowladdu wax eed ama dacwo ah kuma soo rogin wadaadka.
Laakiin, markuu caddeeyey inuu yahay musharrax doonaya inuu u tartamo jagada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayey Dowladda Fedeeraalka Soomaaliya (DFS) soo saartay shuruudo ay ka mid ahayd in cidda musharax noqonysa ay shahaado caddeeneysa inuu yahay dambi la’aan ka haysato Hay’adda Dambi Baarista Soomaaliya (CID), taas oo loo fasirtay iney ugu dan lahayd Musharrax Mukhtaar Roobow. Waxaa arrinkaas ka soo horjeestay siyaasiyiinta ugu saameynta badan Koofur Galbeed, oo qaarkood ka tirsan DFS, sida Guddoomiyaha Golaha Shacabka. Waxay dhammaantood sheegaan in Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed culeys lagu saarayo inuu Roobow ka reebo tartanka.
Isbarbar-dhigga go'aanka Guddoonka Golaha Shacabka ee sharciyadda iyo kala diridda Guddiga Maaliyadda